Yintoni endiyifakeyo ukuyibeka kwi-Dayhike yam yokuqala?
Uluhlu lokuqala lokupakisha
Akukho nto injengekhilomitha okanye ezimbini ukuya entlango, ukuqonda ukuba ushiye ibhotile yakho emva - okanye ifowuni yakho, okanye ibhatyi yakho, okanye ...
Qinisekisa ukuba akunakwenzeka kuwe ngokwenza uluhlu lwepakethe. Lo mkhwa omkhulu wokulandela ngaphambi kokunyuka kwayo yonke, kodwa kubaluleke kakhulu kwiindlela zakho zokuqala ezimbalwa, xa ungeke uqiniseke ukuba uza kuyidinga ngexesha lokunyuka. Nazi izinto ezimbalwa omele uhlale uhamba ngazo, kungakhathaliseki ukuba zide kangakanani okanye zifutshane, ziwayo okanye zishiywe, umzila ungaba:
Iibhothi ezinamandla okanye izicathulo ezinokulungele kakuhle. Jonga izinto ezitshisayo ezinokubangela i-blisters, kwaye uhlale uphula izicathulo zakho ngeendlela ezimbalwa zokuhamba ngaphambi kokuba uqhube umgama omde.
I-backpack (okanye i-daypack) ukuthwala iimpahla zakho. Isikhwama esinobhantshi lwe-hip sikulungele; ivumela amathambo aqinileyo e-pelvis yakho ukuxhasa ubunzima bepakethe, ukunciphisa umthwalo kumahlombe akho.
Izambatho ezifanelekileyo ezikhoyo (kunye nezikulindelekileyo). Hlola isimo sezulu ngaphambi kokuba uhambe, kwaye uhlale ukhumbule ukuba iimeko zitshintsha njani ngokukhawuleza kwindawo yakho.
Amanzi. Nangona awukude, awuyi kuzisola ngokuba nebhotile yamanzi kunye.
Ukutya. Ukutya kwe-calorie-dense yindlela enhle yokuvuselela amandla okugcoba amandla kunye nokukhuthaza isimo sakho. Zama iibhokhwe zamaswidi, iibhajethi zamandla, okanye umxube omncinci wendlela yokutya.
Isikhokelo. Incwadi yokukhokela yendawo ethembekileyo yindawo efanelekileyo yokuqala. Ukuba kukho neyithuba elincinane lokulahleka , kufuneka uvelise imephu kunye nekhampasi, (kwaye uyazi indlela yokuyisebenzisa).
IiNkonzo eziPhezulu. Umlingo ophuthumayo uncinci, ulula, kwaye usebenza naliphi na ixesha ophakathi kweendlebe zabanye. Ngethemba ukuba awusoze uyidinge, kodwa xa kungalindelekanga, uya kuvuya ukuzisa ikhwelo. Izibonelelo zokuqala zokuncedisa zifanelekileyo, nazo.
Ukukhawuleza okukude kunye nokude kwakho ukufumana, ngokuya kufuneka uyenze ukuze ulungiselelwe kakuhle.
I-classic "Ten Essential," yokuqala eyapapashwa kwiMountaineering: Inkululeko yeeNtaba, sele ixutyushwa njengeBhayibhile yezinto zokuqhuba nayiphi na indlela yokunyuka okanye ukuhamba:
Izibuko zelanga kunye nesitrini
I-Headlamp / flashlight
Izinto zokuncedisa okokuqala
Uluhlu oluhlaziyiweyo lweSihlomelo seshumi luthatha indlela yohlelo kumbuzo ofanayo. Ngamanye amagama, nganye ingeniso ibonisa into omele ukuba ilungele ukuphendula ngayo ngexesha lokunyuka (ukukhanya, ukutya, njl njl.), Kwaye ucebisa izinto ezinokuzalisekisa loo njongo:
Ukuhamba (imephu & ikhampasi)
Ukukhuselwa kwelanga (izibuko zelanga kunye neskrini)
Ukufakwa (iimpahla ezongezelelweyo)
Ukukhanyisa (i-headlamp / flashlight)
Izinto zokuqala zokuncedisa
Umlilo (imilinganiselo engenamanzi / i-lighter / ikhandlela)
Ukulungisa ikiti kunye nezixhobo
Ukutya (ukutya okongeziweyo)
Hydration (amanzi angaphezulu)
Indawo yokukhusela yangxamisekileyo (intente / iplastiki yentente / ityhugi)
Qala ngeyodwa yalezi ziluhlu, ke qwalasela into nganye uze uchithe nayiphi na into engenzi kakuhle. Umzekelo: Ukuba uhamba ngeenyawo ngokupheleleyo, ngaphandle kwesitofu seenkampu okanye ezinye izixhobo eziyinkimbinkimbi, mhlawumbi awudingi iikiti zokulungisa kunye nezixhobo. Ijezi kunye neteksi elincinci lingakwazi ukulungisa phantse nantoni na, ukusuka kwintlanzi kwiphakethi yakho yesikhombiso ukuya kwi-shoelaces ephahlakeleyo okanye ukulila kwijacket yakho engenamanzi.
Funda okunye malunga nezinto ezilishumi ezifunekayo kubagibeli
Hlalani nipakisha ubusuku phambi kokunyuka okukhulu, okanye ncinane wenze uluhlu lwepakethe ngobusuku obuphambili. Oku kukunika amathuba amaninzi, ngosuku olulandelayo, ukuba ukhumbule nantoni na oyilibale ukuyibeka kwindawo yakho yokwenza isikhwama.
Unokongeza izinto kwiluhlu lwezinto ezilishumi, ngakumbi xa uhamba nezingane okanye inja. Ukuzisa i-toy oyintandokazi okanye i-pacifier okanye i-snack edizileyo kunokuncedisa ukunyusa i-cranky okanye abantwana abakhathele. Uzakufuna ukutya okongezelelweyo kunye namanzi kubini kunye neenja, kunye nezinja ziza kufuna isidlo sokutya okanye ukusela kwakhona.
"Izintlu ezilishumi" ziphinda zibhalwe ngokunyanisekileyo "Iimfuno Ezilishumi Ezilishumi - Indlela eSebenzayo" eguqulelwe kwiMountaineering: Freedom of the Hills, 8 Edition yi-Mountaineers, i-Mountaineers Books.
Izikhokelo zokuhamba ngeeGraw Gear
Ngaba Abafuduki abaMthethweni bahlawulisa iintlawulo?
Iingelosi zeBhayibhile: Ingelosi yeNkosi iyabiza uGidiyon ukuya kulwa
Indlela yokusebenzisa iilwimi eziguquguqukayo eziguquguqukayo zesiTaliyane
I-Pronoun Definition Definition kunye nemizekelo
Xa abameli beJames Bond babizwa ngokuba yiyekile